Culi Maaudiin ku baaqay in laga qeyb qaato Dhameystirka Masjid la dhisayo+Sawiro – SBC
Culi Maaudiin ku baaqay in laga qeyb qaato Dhameystirka Masjid la dhisayo+Sawiro
Culumada wada dhismaha masaajidka Ramadaan ee magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa umada islaamka kacodsaday ineey ka qeeyb qaataan dhameeystirka masaajidka oo dabaqii labaad Iminka biloowday .
Masaajidka Ramadaan ayaa ku yaal magaalada Gaalkacyo gaar ahaan xaafada Garsoor kasoo mudooyinkaan dhimihiisu socday .
Qaar ka mid ah Culimada iyo waxgaradka ku howlan dhismihiisa ayaa la hadlay saxaafada iyagoona sheegay in Muslimiinta Meelkasta oo ay joogaan siiba SOomaalida dal iyo dibadba ay ka qeyb qaataan dhameystirkiisa Masjid ramadaan.
Iimaanka masaajidka oo lagu magacaabo Shiiq C/risaaq Warsame ayaa u diray wacdi dhamaan umada Islaamka ah isagoo u sheegay in Ajar uu ugu jiro ka qeyb qaadashada howlaha ceynkan oo kale ah.
DR Aadan Maxamed Cigaal oo isna ka mid ah Waxgaradka Wada Howsha Dhameystirka Masjidka Ramadaan ayaa u sheegay Saxaafada in dhismaha guriga eebe yahay midka ugu haboon in laga qeyb qaato dadka Soomaaliyeedna ku boorinayaan in Ajarkooda ku darsadaan Dhismaha Masjidkaan.
Hadaba dhageeyso culumada dhismaha masjidka Ramadaan amal ayaa wax ugu hagaajinkartaa akoonka nabarkiisu yahay 410261 ama 424655 oo uu leeyahay masaajidkaan.